PSJTV | नेपालमा क्यान्सर रोगले भयावह रुप लिदै
नेपालमा क्यान्सर रोगले भयावह रुप लिदै
सोमबार, २१ माघ २०७५ पिएसजे न्युज
काठमाडौ : विश्व क्यान्सर दिवस सोमबार (आज) संसारभरि मनाइदैछ । हरेक वर्ष फेबु्रअरी ४ तारिखका दिन विश्व क्यान्सर दिवस मनाइने गरिन्छ । ‘म हुँ र म गर्छु’ भन्ने मुल नाराकासाथ यो वर्षको विश्व क्यान्सर दिवस मनाउन लागिएको हो । नेपालमा पनि विश्व क्यान्सर दिवसका अवसरमा विविध कार्यक्रम गरिदैछ । पछिल्लो समय नेपालमा क्यान्सरको भयावह रुप देखापर्न थालेपछि यसविरुद्ध सचेतना जगाउन यो दिवसलाई विशेष रुपले मनाइदै छ । सम्बद्ध विशेषज्ञका अनुसार नेपालमा दैनिक रुपमा क्यान्सरका रोगीको संख्या बढदै गएको छ ।
नेपाली पुरुषको फोक्सो र महिलाको पाठेघरमा क्यान्सर अत्यधिक मात्रामा देखापरेको सार्क फेडरेसन अफ अंकोलोजिस्ट नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. राजेन्द्र प्रसाद बरालले बताए । शुरुमा क्यान्सर रोग पत्ता लगाउन सके क्यान्सरलाई जित्न सकिने उनले बताए । पहिले–पहिले ‘क्यान्सर नो एन्सर’ भन्ने चलन थियो, डा बरालले भने, ‘तर अहिले क्यान्सर रोग लागेका धेरै बिरामीले क्यान्सरलाई जितेर सहज जीवनयापन गरिरहेका छन ।’ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठले नेपालमा क्यान्सर रोग भयावह स्थितिमा देखा परिरहेको बताए ।
क्यान्सरको रोकथामका लागि नेपालमा राज्य र व्यक्ति दुवैको उत्तिकै भूमिका रहे पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए । सरकारले क्यान्सरसम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले क्यान्सर लागेकालाई एक लाख रुपैयाँ दिएर क्यान्सर न्यूनीकरण गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे । नेपालमा क्यान्सर सम्बन्धी उपचार हुने सबै अस्पतालमा फोक्सो, मुख, घाँटी, पाठेघर र स्तनको क्यान्सर बढिरहेको जनाउँदै क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठले क्यान्सरलाई रोकथाम गर्न राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुने बताए ।
नेपालमा अहिले प्रमुख क्यान्सरको रुपमा फोक्सो देखिएको छ । नेपालमा फोक्सो, पेट, आमासय, मुख, पाठेघरको मुख, प्रोस्टेट, स्तनको क्यान्सर बढी हुन्छ । त्यसमा पनि महिलामा पाठेघरको क्यान्सर र पुरूषमा फोक्सोको क्यान्सर सबैभन्दा बढी छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका अनुसार गत वर्ष बहिरंग सेवा ओपीडीमा ७७ हजार बिरामी आएकामध्ये तीनहजार ४१२ जनामा क्यान्सर देखिएको थियो । अस्पतालका निर्देशक डा. श्रेष्ठले २० जनासम्म नयाँ रोगी पत्ता लाग्ने गरेको बताए । उनले हप्तामा तीनदेखि पाँच जना क्यान्सरका बिरामीको अस्पतालमा मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा वर्सेनि ४० हजार नयाँ क्यान्सर रोगी थपिने चिकित्सकहरूको अनुमान छ ।
तर तीमध्ये मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र उपचारका लागि अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन् । अर्का क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.सुदीप श्रेष्ठले क्यान्सरलाई रोक्न जनचेतना बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। अहिले पनि चेतनाको अभाव र गरिवीका कारण ९० प्रतिशत क्यान्सर रोगी अस्पतालसम्म आउन नसकेको उनले बताए । नेपालमा हाल जनसंख्याको आधारमा करीव ६५ हजार क्यान्सर रोगी छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा नसर्ने रोगको प्रकोप बढिरहेको छ । नसर्ने रोगमा क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौला रोग, मधूमेह, उच्च रक्तचाप प्रमुख हुन् । यी रोग खानपान, रहनसहन, जीवनशैली र वातावरणका कारणले हुन्छ ।
धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग नै क्यान्सर रोगको प्रमुख कारण रहेको चिकित्सक बताउँछन् । क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुदीप श्रेष्ठले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट टाढा रहेमा क्यान्सरबाट हुने एकतिहाइ मृत्युलाई रोक्न सकिने बताए । करिब ४५ प्रतिशत क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिने, एक तिहाइ क्यान्सर उपचारबाट निको बनाउन सकिने र बाँकी बिरामीलाई पनि उपचारबाट आरामदायी आयु लम्ब्याउन सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । तर यसका लागि समाजका सबै वर्गलाई परिचालन गरी क्यान्सर नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अपनाउन आवश्यक छ ।
विभिन्न अनुसन्धानले ९० प्रतिशत क्यान्सरको प्रमुख कारण धूम्रपान, सूर्ति, अस्वस्थकर खानपान, रहनसहन र वातावरणीय प्रभाव रहेको देखाएको छ । १० प्रतिशत क्यान्सर भने शरीरको आन्तरिक कारणले हुन्छ । यसका साथै विकिरण, बव्यावसायिक प्रदूषण, भाइरस, परजीवी, सरसफाइमा कमी, बंशाणुगत कारण, शारीरिक दुर्वलतालाई पनि क्यान्सरका कारणका रुपमा लिइएको छ । क्यान्सरका लक्षणहरूमा स्वर परिवर्तन हुनु, दुब्लाउदै जानु, शरीरमा गाँठागुठी वा गिर्खा देखिनु, भोक नलाग्नु, कोठी वा मुसाको आकार देखापर्नु, थकाई बढी लाग्नु, लामो समयसम्म घाउ निको नहुनु, लगातार खोकी लाग्नु, महिनावारी हुँदा रगत बढी जानु जस्ता लक्षण हुन् ।
काठमाडौं डेङ्गुकाे उच्च जोखिममा, डब्लूएचओले दियो यस्तो सुझाव
४३ जिल्लामा फैलियो डेंगु, कहाँ कति बिरामी?
एकै पटक २५ जना 'एनेस्थेसिया डाक्टर'ले राजीनामा दिए के हुन्छ ?
अभिभावकत्व ग्रहण प्रधानमन्त्रीले नै बिर्सिए
कस्तो हुन्छ यस वर्ष नेपालमा मनसुनी वर्षा ? यस्तो छ प्रक्षेपण
श्रीमान–श्रीमती स्वीकारेर सँगै बसे पनि लामो समयसम्म निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलले आफ्नो सम्बन्ध लुकाएर दर्शकलाई मुर्ख बनाइरहे। नायिका रेखा थापासँग डिभोर्स भएपछि छविले शिल्पालाई फिल्म क्षेत्रमा अगाडि बढाए। ...
19th Jun 2019 पिएसजे न्युज
काठमाडाैंः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चारमाध्यमहरुमाथि नेपाली भाषा बिगारेर प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। सिंहदरबारमा मंगरबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सञ्चारमाध्यमका कारण नेपाली भाषाका आदरार्थी शब्द हराउन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। यो ...
4th Jul 2019 पिएसजे न्युज
काठमाडौं : भारतको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन् । गत महिना कांग्रेसको अध्यक्ष पद छाड्ने घोषणा गरेका अध्यक्ष गान्धीले पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा ...